Brick Standard Glass Beads China Manufacturer
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Brick Standard Glass Beads
antsipiriany momba ny vatana sy ny simika
1. Soso-kevitra: fitaratra sanga
2. Fitoviana: tsy misy loko sy mangarahara, tsy misy fahalotoana mazava
6. indraindray fandrefesana nd> = 1.50
Azo ampiasaina amin'ny fampiasana hafa:
anisan'izany ny loko eny amin'ny arabe, ny marika famantarana ny lalana, ny loko, ny loko, ny loko, ny marika famantarana ny lalana, ny marika famantarana, ny loko, ny labozia, ny labozia, ary ny endriny.
Ny loko mamaritra ny lalana momba ny lalana mitahiry rano, izay antsoina koa hoe pentina miloko manga, dia karazana loko vovoka. Rehefa ampiharina amin'ny mari-pamantarana eny an-dàlam-be, dia misy fitaovana famolahana kilaometatra mafana ny hafanana azy amin'ny 200 ° C (392 ° F), aorian'izay izy io dia miparitaka eny amin'ny arabe. Ny loko dia lasa tsipika aorian'ny fofona. Io loko io dia fehikibo matevina, mitafy fanoherana, mamiratra ary mandanjalanja. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fampiharana azo ampiharina dia nanaporofo fa tsy manana teboka maromaro ny teboka marika ary mety hiteraka korontana ny kodiarana, ka mahatonga ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lanezy sy ny orana. Noho izany, nisy ny firenena sasany indray nametra ny fampiasana an'io loko io. Mba hampitomboana ny fahombiazan'ny tsipika, ny loko thermoplastika dia nampitombo ny kofehy fitaratra.